Madzimai eWomen of Dominion International Osendeka Musangano wePagore Nekuda kweCoronavirus
Sangano reWomen of Dominion International rinobatanidza madzimai anobva kuZimbabwe ari kunze kwenyika.
Sangano reWomen of Dominion International rinoti harisi kuita musangano waro wepagore gore rino nekuda kwechirwere che coronavirus.
Mutungamiri wesangano iri, Pastor Marvelous Ndhlovu, vanoti madzimai anobva munyika dzakasiyanasiyana anga achitarisirwa kusangana ku Los Angeles mudunhu reCalifornia muna Chikumi asi nekuda kwekurudziro yekuti vanhu vasaungana senzira yekudzivirira kupararira kwe coronavirus, vaona zvakakosha ] kuti musangano wavo usaitwa.
Pastor Ndhlovu vanoti sezvo mamwe madzimai achibva kunze kweAmerica, miganhu yenyika dzakawanda yakavharwa pari zvino zvekuti kana dai zvinhu zvakazogadzikana panenge pasisina nguva yekuti madzimai aya agadzirire.
"Ndinoda kutenda Mwari nekuwana mukana wekutsanangura kuti gore rino takaona zvakakodzera kuti tisaita musangano wedu weWomen of Dominion watanga tichifanirwa kuita muna June, June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California.
"Saka takazogara sedare takakanzura musangano iwoyo. Gore rino tanga tichi celebrator nine years dzekunge tiri Women of Dominion, kubva patakatanga tichitanga kusangana gore ra2012."
Pastor Ndhlovu vanoti chakanyanyoita kuti vakanzure musangano wegore rino zvikonzero zvakati wandeyi, chekutanga chiri chechirwere che coronavirus.
"Patakatarisa nekunyatsoongorora, uyezve nekunyanyonzwisisa nezvatiri kunzwa nema forecast takaona kuti izvo musangano iwoyo uchanetsa kuti ubudirire, uye zvinogona kuti strainer isusu vanotungamirira Women of Dominion nevano attender as well.
"Dambudzo rekutanga tichiziva kuti tose coronavirus yaka affecter even kubva vanhu kumabasa. Even kuLos Angeles kwatiri kuenda it's one of the cities iri kunzi ichaita ma cases akawanda, saka kuti June tifokasite kuti zvinhu zvinenge zvave nani panguva iyoyo in that city nemaonero edu uye nekunzwa pamweya, hatina kuona kunge zviri zvinhu zvakanga zvakanakira musangano wedu," vanodaro Pastor Ndhlovu.
Women of Dominion International yave nemakore mapfumbamwe yaumbwa uye inobatanidza madzimai anobva kuZimbabwe ari munyika dzakasiyanasiyana mukurarama mushoko raMwari.
Hurukuro naPastor Marvelous Ndhlovu